Bogga ugu weyn Hadda Lacag baan u Baahanahay !!! Raac talaabooyinkan fudud si aad lacag u hesho
Aniguna halkaas ayaan joogay. Lacag u kaydinta waxbarashadaada si aad uga fogaato amaahda ardayga, daryeelidda qoyska, helidda hoy, beddelidda dharkaaga, furitaanka ganacsi, ama ku -tallaabsashada biilka dayactirka baabuurka ayaa dhammaantood noqon kara kuwo aad u culus.
Haa, dhammaanteen waxaan ku dhufannay derbi leben mar uun nolosheena. Waxa kaliya ee aan ka fekeri karnay waxay ahayd hab aan wax uga qaban karno si aan u helno nolol maalmeedkeena.
Tani waa meesha fikrad ah in lacag la sameeyo maskaxdeenna soo gala. Waxaad igu raaci doontaa in ay jiraan malaayiin liis oo ku saabsan sida lacag loo helo hadda – laakiin badidoodu si dhakhso ah uma filna.
Aniga iyo adiga labadaba waan ognahay in weedha ah "Lacag baan u baahanahay" macnaheedu waa "Hadda waan u baahanahay." Marka, markaad tixgeliso caqabadaha qaarkood, sida xaddiga dadaalka shaqada la geliyay,
Aniga iyo adiga labadaba waan ognahay in weedha ah "Lacag baan u baahanahay" macnaheedu waa "Hadda waan u baahanahay." Marka, markaad tixgelinayso caqabadaha qaarkood, sida xaddiga dadaalka shaqada lagu galay, doorashada hab fudud ayaa ah ikhtiyaarka ugu habboon. Nasiib wanaag, waxaa jira tallaabooyin badan oo sharci ah oo la raaco haddii aad rabto lacag dhaqso ah.
Maqaalkan, waxaan ku taxay 18 siyaabood oo kaa caawin doona markaad u baahan tahay lacag caddaan ah hadda-sida gudaheeda, 24-48 saacadood gudahood, iyo kuwo kale oo qaadan kara 1-2 toddobaad in lacag lagu siiyo.
1. Yaree Lacagaha Amaahda Ardayga
Ma ogtahay in 44.7 milyan oo Mareykan ah ay lacag ku leeyihiin amaahda ardayda? Miyaad ka fikirtay dib -u -cusboonaysiinta amaahda ardaygaaga?
Dib -u -maalgelinta waxaa loola jeedaa in dayn -bixiyuhu bixiyo deymahaagii hore oo abuuro deyn cusub oo keli ah oo dib loogu bixin doono dulsaar hoose (sida habboon).
Tani waxay faa'iido u tahay kuwa haysta amaahda ardayga maxaa yeelay waxay xoojineysaa bixinta amaahda billaha ah waxayna kuu keydineysaa lacag!
Shirkado badan oo dib -u -hagaajin ah ayaa ku siin doona dib -u -hagaajinta iyaga oo ay u dheer tahay inay kuu keydsadaan lacag iyo hoos u dhigista deyntaada billaha ah!
Akhri Sidoo kale: SIDA LACAGTA LOOGU SAMEEYO BILAASHA BILAASHKA: 30ka dariiqo ee ugu fiican sannadka 2021
2. Lacag lagu siiyo inaad aado Dukaameysiga Raashinka
Miyaanay run ahayn in qof walba cuntada iibsado? Markaa halkaas waad haysataa, weli waa hab kale oo lacag lagu sameeyo. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada dib -u -dhiska si aad u sameyso dukaanka raashinkaaga.
Adigoo ku sawiraya rasiidkaaga taleefankaaga, barnaamijyada sida Ibotta waxay ku bixin kartaa lacag -dhimis lacageed iibsiyada cuntadaada.
Waxaad ku dukaameysaa dukaamaysigaaga raashinka caadiga ah, waxaadna ka heli kartaa qiimo dhimis waxyaabaha aasaasiga ah sida hilibka, rootiga, iyo ukunta.
Mar labaad, tani maahan il dakhli, laakiin waxay ku bixisaa lacag -bixin lacageed iibsiyada caadiga ah, taas oo asal ahaan la mid ah.
3. Baaritaannada Vindale
Cilmi -baarista Vindale waa mid ka mid ah shirkadaha sahanka ugu qadiimsan, taas oo macnaheedu yahay inay garanayaan waxay samaynayaan.
Waxaad ka heli doontaa meel kasta $ 1 illaa $ 5 sahan kasta, taas oo aan u xumayn waqtiga aad gelin doonto
Waxaad sidoo kale buuxin kartaa qiimaynta badeecada, oo wakhti badan qaadata laakiin ku kasban karta lacag badan.
Waxay ku siin doonaan badeeco ama adeeg beddel dib u eegis daacad ah. Tani waxay bixin kartaa meel kasta oo u dhaxaysa $ 5 iyo $ 75.
4. Ku samee heshiis biil.
Wac dhowr ka mid ah bixiyeyaasha adeeggaaga ka hor inta aan biilashaada la gaarin si aad u ogaato haddii aad ka gorgortami karto heshiis wanaagsan.
Haddii aad yareyn karto biilkaaga kabka $ 110 illaa $ 70, tusaale ahaan, waxaad badbaadin lahayd $ 40 oo aad jeebkaaga ku hayn lahayd bil kasta.
Markaan sidaas yeelnay, waxaan awoodnay inaan ka badbaadino ku dhawaad ​​$ 70 lacagtii biilka dayax -gacmeedka. Waxa kaliya oo ay ahayd inaan sameyno waxay ahayd inaan wacno oo aan si caadi ah u sheegno inaan u beddelayno mid ka mid ah tartamayaashooda, iyo dhammaadka wicitaanka, waxaan kaydinnay lacag aad u badan oo dhammaan qalabkeenna waa la casriyeeyay.
5. Go'aanso cidda kugu leh lacag.
Waxaa laga yaabaa inaad hore u amaahatay lacag, laakiin waligaa ma ku soo celiyeen? Tani waa hab fiican oo dhaqso loogu helo lacag haddii qof lagugu leeyahay $ 20, $ 50, ama $ 100 oo aad soo ururin karto.
Tixgeli dadka iyo xaaladaha laga yaabo inaad hore u amaahatay lacag ka hor inta aadan guri guri u galin.
Waxaa laga yaabaa inaad bixisay casho qof sababtoo ah kalkaaliyahaaga ayaa diiday inuu kala qeybiyo biilka. Waxaad mar walba ku weydiisan kartaa si xushmad leh.
6. Tixgeli helitaanka deyn shaqsiyeed.
Waad ku mahadsan tahay horumarka farsamada, maalmaha baaritaanka, wicitaanka, iyo isbarbardhigga xigashooyinka amaahda shaqsiyeed way dhammaadeen.
Markaa, haddii aad u baahan tahay lacag oo aad rabto inaad ka fogaato dhibka, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho isku -duwaha amaahda shaqsiyeed, kaas oo kuu samayn doona dhammaan shaqada lugta oo ka dhigaysa helitaanka deynta shaqsiyeed mid fudud.
Laakiin waa kuwee isku -duwaha waa inaad isticmaashaa si aad u hesho oo isbarbar dhigto amaahda shaqsiyeed iyo xigashooyinka alaabada maaliyadeed ee kale?
7. Craigslist waa meel fiican oo lagu iibiyo alaabtaada.
Dhammaanteen waxaan isticmaalnay walxo aanan mar dambe doonayn. Maxaad u dhigi weyday iibka? Waxaad ka takhalusi kartaa alaabta sida alaabta guriga, CD -yada, elektiroonigga, iyo xitaa dharka adoo ku dhejinaya dhowr xayeysiis oo fudud (oo bilaash ah) Craigslist.
Haddii aad xubin ka tahay kooxaha dib -u -iibinta Facebook, waxaad sidoo kale ku qori kartaa alaabtaada iibka halkaas.
Si fudud u qiimee alaabtaada si ay dhaqso u iibiyaan. Sheyga saxda ah, qiimaha saxda ah, iyo xoogaa nasiib ah, waxaad ku heli kartaa gacmahaaga lacag caddaan ah waqti yar.
Akhri Sidoo kale: Ma ku iibin kartaa baabuur liiska Craigslist? Hacks -ka fudud ee 2021 -ka
8. Ka codso horjoogahaaga hormaris jeeg.
Marnaba, weligay kuma talin lahaa in qof qaato amaahda mushahar bixinta. Si kastaba ha ahaatee, ma dhaawici karto in aad weydiisato maamulahaaga hormaris mushahar.
Haddii aad dhab ahaantii u baahan tahay lacagta, u sharax xaaladdaada maamulahaaga oo arag haddii ay ku caawin doonaan.
Xaaladda ugu xun, waxay dhihi doonaan maya waxayna kuu diri doonaan jidkaaga. Sida ugu fiican, waxay ku heshiin doonaan in laga jaro dhawr boqol oo doolar jeeggaaga xiga.
9. Hel shaqo adeeg.
Midkani wuxuu qaadan karaa ilaa toddobaad, laakiin wuxuu si dhaqso ah kuugu ridi karaa jeebkaaga. Haddii aad u baahan tahay lacag hadda oo aadan sugi karin waqti dheer, shaqo waqti-dhiman ah sida adeegaha ama baarka kalkaaliyaha ayaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin.
Markaad dhammaysato tababarkaaga, waa inaad bilowdaa kasbashada talooyin isla markiiba. Kani ma noqon karo habka ugu fiican ee dhaqso loo helo lacag, laakiin waxaa ku filnaan karta bixinta biilasha. Intaa waxaa dheer, maahan inaad weligaa halkaas joogto, miyaad tahay?
10. Isticmaal TaskRabbit.
Waxyaabaha yaabka leh ee internetku waxay keeneen siyaabo aad u fara badan oo dadku dhaqso lacag ku helaan. TaskRabbit waa mid ka mid ah mareegaha noocaas ah oo kaa caawin kara arrintan. Is -qoritaanku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u shaqayso dadka kale intaad lacag hesho.
Ka -qaadista dhar -dhaqidda nadiifiyeyaasha, samaynta raashinka, qaadashada dawooyinka, iyo eyda socodka ayaa ah dhammaan hawlaha caadiga ah.
Haddii aadan ka fikirin inaad qabato hawlo aan kala sooc lahayn oo aad ku beddesho lacag caddaan ah oo degdeg ah, tani waa ikhtiyaar aad u fiican.
Akhri Sidoo kale: Sida Lacag Loogu Sameeyo Baraha Bulshada Si Degdeg Ah 2021
11. Kiro Baabuurkaaga
Aynu daacad noqonno. Gaarigaaga, si kasta oo aad u jeceshahay (ama u quudhso), badiyaa waa mas'uuliyad weyn Kharashka shidaalka, qiimo -dhaca, caymiska, iyo dayactirka dhammaantood waxay isku noqonayaan culays dhaqaale oo weyn. Maxaa dhacaya haddii aad u beddeli karto mas'uuliyaddaas hanti?
GetAround wuxuu ballan qaadayaa inuu sidaa yeeli doono. Barnaamijkan, waxaad dadka ugu oggolaan kartaa inay ku kiraystaan ​​baabuurkaaga khadka tooska ah lacag hore loo cayimay (taas oo ku kala duwan samaynta, moodalka, iyo sannadka gaadhigaaga).
Markaa, halkii aad ururin lahayd boodh inta aadan isticmaalin, baabuurkaagu wuxuu abuuri karaa dakhli dadban si uu gacan uga geysto dib -u -dhigga kharashyada aan hore u soo sheegnay. Maxay tahay inaan la jeclayn?
Iyada oo ku xidhan inta jeer ee aad kiraysato baabuurkaaga, waxaad si dhakhso ah u kasban kartaa ilaa $ 500.
12. Waa inaad Iibisaa Dharkaaga
Waxaa hubaal ah inaad armaajadaada ku haysato dhawr shay oo dhar ah oo aan la rabin. Haddii aad lacag u baahato isla markiiba, waxaa laga yaabaa inaad iibiso dharkaas oo aad samaysato xoogaa dhaqso ah.
Nasiib wanaag, waxaa jira dhawr fursadood oo lagu iibiyo dharkaagii hore. Waad iibsan kartaa garaashka haddii aad haysato dhar badan, laakiin dadka badankoodu ma haystaan ​​dhar ku filan oo ay ku sameeyaan.
13. U shaqee Waiter ama Kabalyeeri
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan u shaqaynta kabalyeeriye ama kabalyeeri ayaa ah in sida caadiga ah si dhakhso ah laguu shaqaalaysiin karo isla markaana aad isla markiiba bilaabi karto shaqada.
Iyo, adiga oo aan wax mushaar ah lagu siin doonin dhowr toddobaad, haddii aad shaqadaada si fiican u qabato, waxaad bilaabi doontaa inaad hesho talooyin isla markiiba. Ka hubi makhaayadaha silsiladda maxalliga ah shaqo degdeg ah sida kabalyeeri ama kabalyeeri.
14. Qaado shaqada jaridda cawska.
Daryeelka cawsku waa mid ka mid ah shaqooyinkaas oo dad badani ay si farxad leh u bixin lahaayeen si loogu sameeyo. Haddii aad dhaqso lacag ugu baahan tahay, waxaad bixin kartaa adeegyo daryeel caws oo kala duwan.
Waxaad goyn kartaa cawska, caleemaha rak, baraf majarafadaha xilliga jiilaalka, ama samayn kartid jaridda iyo qurxinta aasaasiga ah.
Talooyinka kale waxaa ka mid ah jaridda jardiinooyinka iyo u diyaarinta beeraha khudradda ama ubaxa jiilaalka.
Qiimayaasha ayaa sida caadiga ah lagu gorgortamaa shaqo kasta waxaana la bixiyaa isla marka shaqada la dhammeeyo. Haddii aad si sax ah u ciyaarto kaararkaaga, waxaa dhici karta in macmiisha qaar ay kuu shaqaaleeyaan si joogto ah oo aad toddobaad walba lacag degdeg ah samaysato.
Akhri Sidoo kale: Immisa Aragti Ayaa Ka Qaadata In Lacag Lagu Sameeyo YouTube -ka | Dib u Eegid Buuxda
15. Nolol ahaan u samee sida jilaa waddada.
Haddii aad heesi kartid, sameyn kartid istcimaalka jirka, garaaci kartid gitaarka ama biyaano, ama sameyn kartid majaajilo istaag, waxaad u badan tahay inaad lacag ku sameysid wadada dhinaceeda, sax? Ugu yaraan, waad tijaabin kartaa!
Wax kasta oo “xirfaddaada” ah, waxaad u badan tahay inaad kasbato ugu yaraan xoogaa lacag ah haddii aad ku soo bandhigtay aagga gaadiidka badan.
Samee baaldi ama koofiyad si aad dadka u ogeysiiso inaad aqbaleyso tabarucaadka oo u oggolow waqtiyada wanaagsan inay soo laabtaan.
16. Fiverr waa meel fiican oo laga helo riwaayado.
Fiverr wuxuu la mid yahay Upwork oo ah in lagu siiyo lacag si aad u dhammaystirto shaqo ama hawl waqti gaaban ah. Farqiga ayaa ah in shaqooyin badan oo Fiverr ay yihiin kuwo deg -deg ah oo bixiya $ 5 oo keliya.
Tusaale ahaan, qof ayaa laga yaabaa inuu kaa codsado inaad gabay u qortid qof aad jeceshahay ama sawir deg deg ah oo xayawaankooda ah.
Si fudud u baari shaqooyinka Fiverr oo ka codso kuwa aad si dhakhso leh u dhammaystiri karto, ama u abuuri karto astaan ​​oo aad halkaas ugu fidiso adeegyadaada.
Akhri Sidoo kale: 13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan lacag la hayn 2021
17. Tixgeli dhoofinta dhoofinta.
Weligaa ma maqashay erayga “dhoofinta dhoofinta”? Waa hab tafaariiqeed oo uusan iibiyuhu lahayn agab wax -ku -ool ah.
Taa beddelkeeda, marka macaamilku dalbado, waxaad ka iibsanaysaa shayga dhinac saddexaad, oo markaa u diraya macaamilka.
"Tani waxay ka dhigan tahay inaadan waligaa bixin lacag dime ah si aad u kaydiso alaabtaada ama aad u haysato alaabadaada," ayay tiri International Living.
“Marna ma iibsan doontid badeecooyin badan adiga oo rajaynaya inaad dib u soo ceshato maalgashigaaga.
18. U shaqee sidii madax -bannaane
Miyaad ku fiican tahay qorista maqaallada onlaynka ah, abuurista dib -u -cusboonaysiinta, naqshadeynta mareegaha, hawlaha kaaliyaha dijitaalka ah, ama naqshadeynta garaafka?
Haddii ay sidaas tahay, waxaad ku samayn kartaa xoogaa lacag degdeg ah adiga oo ka helaya dhowr gigsi oo xor ah goobaha sida Upwork.
Qoysaska iyo shirkaduhu waxay adeegsadaan Upwork si ay u helaan shaqaale madax -bannaan markay u baahan yihiin shaqo la qabto laakiin ma haystaan ​​shaqo ku filan oo ay ku kireystaan ​​shaqaale rasmi ah.
Shaqooyinka Freelancing ee Upwork si joogto ah ayaa loo dhammaystiraa maalin ama laba maalmood, badanaana waad shaqayn kartaa saacad kasta oo maalinta ah oo ku habboon jadwalkaaga.
Qiimaha mushaharku wuu kala duwan yahay hadba nooca shaqada lagaa codsaday inaad qabato. Waxaad geli kartaa macluumaadka koontadaada xaqiijinta, mar kasta oo ay shirkad ku siiso, waxay si toos ah ugu shubtay lacagta akoonkaaga bangiga.
Sidee Khilaafku Lacag Ku Helaa | 2021 Faahfaahin Buuxda
Buugaagta ugu Fiican ee Laga Akhriyo Maalgelinta 2021
Talaabooyinka Fudud ee Lagu Heli Karo Maanta Raaxada Gurigaaga
Haa, waxaad maanta lacag ka heli kartaa raaxada gurigooda! Dunidu waxay noqotay dijital iyo…
Waxaad halkan u timid sababtoo ah waxay u badan tahay inaad raadineysay wax kale ee ma ahan sababtoo ah waxaad runtii dooneysaa inaad...
Waa kuma YouTuber -ka ugu Lacagta Badan | 10ka ugu sareeya ee Lacag Bixinta YouTubers 2022.
Weligaa ma malaynaysay in YouTube uu noqon doono suuqa ugu caansan adduunka maanta? Meel dadka caanka ah lagu sameeyo. dhashay…